‘Rimai mbeu dzinoshingirira muzuva’ | Kwayedza
‘Rimai mbeu dzinoshingirira muzuva’
19 Oct, 2018 - 00:10	 2018-10-18T10:50:15+00:00 2018-10-19T00:05:22+00:00 0 Views
VARIMI vari kumatunhu asinganaye mvura zvakanaka munyika muno vokurudzirwa kuti varime mbeu dzinoshingirira muzuva, zvikuru mwaka unotevera apo nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dziri kuti Zimbabwe yakatarisana nekushomeka kwemvura yekunaya.
Kurudziro iyi yakaitwa nekambani yeChampion Seeds kana kuti Champion Farmer Shasha iyo iri kunyanya kushanda nevarimi vekunzvimbo dzisinganaye mvura zvakanaka nekuda kwemhando dzembeu dzainogadzira.
VaWally Zonge (43) vanova mushandi anoona nezvekutengeswa uyewo vari murimisi kukambani iyi vanoti vari kuvandudza mbeu dzinorimwa kunzvimbo dzisinganaye mvura yakaringana.
“Sekambani, donzvo redu nderekushanda nevarimi mumbesa diki dzinoshingirira muzuva. Takanyanya kutarisana nematunhu anoti Uzumba Maramba Pfungwe, Murewa, Mutoko, Mudzi neTsholotsho uko kusinganaye mvura zvakanaka. Tinotarisira kuramba tichipambira kune mamwe matunhu,” vanodaro. Kambani iyi inouchika mbeu dzinosanganisira chibage, mhunga, mapfunde, bhinzi nenyemba.
“Mbeu dzatinogadzira dzinonzi Open Pollinated Variety (OPV) dzinosanganisira yechibage nedzimwe, kuchibage tine ZM309 neZM521 idzo dzinokurumidza kusvika zvikuru,” vanodaro.
Mhando dzembeu yechibage ichi vanoti kana varimi vakohwa vanokwanisawo kuzotora mbeu yemudura vachidyara iyo inonzi haina dambudziko.
“Mbeu yedu inotora mazuva ari pakati pe90 kusvika 120 isina dambudziko rekupfukutwa zvichisiyana nembeu yacho uyewo murimi anokwanisa kusvika matani 12 pahekita,” vanodaro.
Champion Seeds inoshanda nemamwe mapoka anosanganisira sangano reCommunity Technology Development Trust (CTDT) neOxfam Novis yekuNetherlands.
“Tine mbeu itsva yenzungu inonzi Nau 45 iri kutanga mwaka uno wezhizha wave kusvika, tanga tagara tiine imwe mhando yembeu yenzungu inonzi Ilanda Guinea Fowl uye kumhunga tine inonzi Okashana,” vanodaro.